Amai Kate Hoey vekuBritain Vokurudzira Dare Kuti Risatore Divi paNyaya yeSarudzo Iri Kukwikwidza naVaChamisa
Nyamavhuvhu 19, 2018
British Member of Parliament Kate Hoey. (Photo: Kate Hoey Twitter Account)
Nhengo yedare reparemende rekuBritain reLabour Party vachimiririra Vauxhall muLondon amai Kate Hoey vanoti vakatarisira kuti dare reConstitutional Court remuZimbabwe ritonge nyaya yesarudzo iyi risina divi rarinorerekera.
Vachitaura parunhare neStudio 7 nhasi, Amai Hoey vati shuwiro yavo ndeyekuti vatongi vaite basa nemazvo uye sarudzo dzidzokorerwa kana dzisina kufambiswa zvakanaka.
Amai Hoey ndivo sachigaro webazi reCross Party Zimbabwe Parliamentary Group muparamende yeBritain uye vakashanya munyika pasi peCommonwealth Parliamentary Association kuzoongorora sarudzo dzemunyika. Vanoti kunyangwe munyika mainge musina mhirizhonga, vanopikisa vaisawana mukana wekuzvizhambadzawo panhepfenyuro dzehurumende.
Asi vanoti vari kushushikana zvikuru nemhirizhonga yakazoitika mushure mesarudzo uye havana vimbo yekuti pane zvakati tsvikiti zvichabuda pavimbiso yemutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa yekuti vachaumba komiti inoferefeta kupfuurwa kunonzi kwakaitwa vamwe vanhu nemauto muguta reHarare.
Amai Hoey vaenderera mberi vachiti parizvino zvinoratidza kunge vechiuto ndivo vari kutonga nekuti VaMnangagwa semutungamiri wenyika vangadayi varikuziva kuti ndiyani akawuraya vanhu vakapfurwa mushure mesarudzo pakaitika mhirizhonga munyika.
Amai Hoey vanoti havabvumirane nehukama hunonzi huripo pakati pemumiriri weBritain muZimbabwe Amai Catriona Laing nehurumende yaVaMnangagwa uye vari kutarisira kuti mumiriri mutsva achasandura zvinhu.
Vaendererawo mberi vakati zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru muhurumende ye Zimbabwe nedzimwe nyika zvinofanirwa kuramba zvakasimbiswa kusvika nyika yaratidza kuti yave nehutongo hwejechetere.
Zimbabwe iri kugunun’una kuti zvirango izvi zvinofanira kubvisa sezvo iri shamu kuvarombo.
Hurukuro naAmai Kate Hoey